ဘောလုံးဟောကိန်းများ Club Nacional vs Villa Espanola 25 July 2021
ဥရုဂွေးပထမ ဦး စွာဌာန Apertura 2021
Club Nacional3Villa Espanola 0
ရေနံချောင်း ခန့်မှန်းချက် — 4ခန့်မှန်းချက်များ
FutebolBrasil (82.19% ရေနံချောင်း / 146) Club Nacional အနိုင်ရသူ
1xTipz (56.88% ရေနံချောင်း / 5840) Club Nacional အနိုင်ရသူ
Asianbookies (75.41% ရေနံချောင်း / 12020) Club Nacional အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Club Nacional vs Villa Espanola ဒီ၏ Jul 25, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် ဥရုဂွေးပထမ ဦး စွာဌာန Apertura 2021
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Club Nacional vs Villa Espanola?
ဥရုဂွေးပထမ ဦး စွာဌာန Apertura 2021 ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Club Nacional vs Villa Espanola အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ ဥရုဂွေးပထမ ဦး စွာဌာန Apertura 2021 of Jul 25, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Club Nacional အနိုင်ရ၊ Villa Espanola အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် Gonzalo Rubén Bergessio
၏ရည်မှန်းချက် Brian Alexis Ocampo Ferreira
အစားထိုး Robert Mario Flores Bistolfi
အစားထိုး Dennis César Olivera Lima
အစားထိုး Alfonso Trezza Hernández
အားဖြင့် Marcos Maximiliano Cantera Mora
အစားထိုး Andrés Nicolás D'Alessandro
အားဖြင့် Leandro Miguel Fernández
၏ရည်မှန်းချက် Andrés Nicolás D'Alessandro
အစားထိုး Joaquín Gabriel Trasante Hernández
အားဖြင့် Felipe Ignacio Carballo Ares
အစားထိုး Gabriel Neves Perdomo
အစားထိုး Diego Gonzalo Vega Martínez
အားဖြင့် Brian Alexis Ocampo Ferreira